အဖေဖြစ်သူမှ လေအေးလေးဖြင်. ဆုံးမနေသည်...၊
အဖေ ။ ။ သား မင်းဒီလိုပဲအရက်သောက်နေတော.မှာလား
သား ။ ။မဟုတ်ပါဘူးအဖေ သားအမြည်းလည်းစားပါတယ် တဲ.
"မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒကို ပြောပါ" မေးလိုက်တယ်။
” တစ်ကောင်ကို တစ်ဒေါ်လာစီပေးပြီး ကြိုက်တာဝယ်စားလို့ ပြောလိုက်တယ်"
တစ်နေ.တော. ဦးစံလှ တစ်ယောက်အပြင်မှခေါင်းပေါက်ကာ အိမ်သို.ပြန်လာသည်။
တော်.နယ် မကြီးမငယ်နဲ.ဘယ်လိုဖြစ်လို. ခေါင်းပေါက်လာရတာတုန်း
(ရွာမြောက်ပိုင်းက အပျိုကြီး လှတုတ်ပေါ့ငါ့ကိုနို.ဆီဘူးနဲ.ထုလိုက်တာ
တော်ကဘာသွားလုပ်လို.တုန်း သူနွားနို.ညှစ်နေတဲ.နား သီချင်းသွားဆိုမိတာကိုးဟ
ဦးစံလှက အသံနေအသံထားနဲ.ဆိုပြသဖြင်. ဒေါ်သန်းမြင်.ရော သားသမီးများပါ
ဦးစံလှကို နို.ညှစ်နေသောအပျိုကြီး မလှတုတ်က နို.ဆီဘူးနှင်.ထု၍ ခေါင်းပေါက်သေ သီချင်းမှာ
(၀ဋ်လည်မယ် အချစ်ဆုံးရေ...၀ဋ်လည်မယ် အချစ်ဆုံးရေ...
မြင်းပိန်မကြီး ရောင်းရန် သွားသောလယ်သမားကြီးပြန်လာရာ
လယ်သမား။။။။ရောင်းဖို့သွားတာပဲ ဈေးရောက်တော့ ဒေါ်လာ(၆၀)နဲ့ရောင်းဖို့
ပွဲစားလက်အပ်လိုက်တာ ပွဲစားက ငါမသိသေးတဲ့မြင်းပိန်မရဲ့ ကောင်းကွက်နဲ့
အရည်အခြင်းတွေ ထုတ်ဖော်ပြီး ၀ယ်သူကိုခေါ်တော့တာပဲဟေ့…
ငါလည်းပွဲစားပြောတာတွေနားထောင်ပြီး မြင်းပိန်မကိုရောင်းဖို့ နှမျော လာတာနဲ့
အိမ်ရှင်။။။ အရင်စာပို့သမားက ကျမခွေးနဲ့ အဆင်ပြေတယ် ပြသနာမရှိဘူး
အခုစာလာပို့တဲ့ စာပို့သမားအသစ်နဲ့ ကျွန်မခွေးနဲ့အဆင်မပြေတော့
ခွေးက စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး ယောက်ယက်ခတ်နေတယ်။။။
အိမ်ရှင်။။။စာပို့သမားလား။ အခုသစ်ပင်ပေါ်ကနေ ခွေးကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်
ဆေးရုံမှ လင်မယာနှစ်ဦး ထွက်လာသည်။ လမ်းတွင် တက်စီငှားသည်။
မိန်းမက တက်စီသမားအား”ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေးဖြေးမောင်းပေးပါနော်.
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် မနေ့ကအမောင်းကြမ်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာနဲ့တွေ့တာ ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်။”
တက်စီသမား။ ။”ဪ….ခင်ဗျားတို့ကိုး။ ကြည့်စမ်း၊ ရုတ်တရက် မမှတ်မိဘူး”
အသုဘ တစ်ခုသို့ လိုက်ပါပိုဆောင်သူများသည် တိတ်တဆိတ် ဆုတောင်းကြပြီးနောက်
အခေါင်းအား မြေကျင်း အတွင်းသို့ချလိုက်ကြကာ ၀ိုင်းဝန်းမြေဖို့ပေးနေစဉ်….
ဟုဆိုသောအသံအားကြားလိုက်ရ၏။။။လူအများခဏမျှ ညိမ်သက်သွားပြီး ခေါင်းအတွင်းမှထွက်ပေါ်
လူအုပ်ထဲမှ လူတစ်ယောက်၏ အသံအားကြားလိုက်ပြီးနောက်
“““ အဲဒီကောင်ကရှေ့နေ သူပြောတာကိုမယုံနဲ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာ ဆက်ပြီးသာမြေဖို့ကြ ”””တဲ့။။။။။။။
ကိုဘမောင် တက္ကစီ တစ်စင်အား သွားလိုရာသို့ပြောပြီးငှားစီးလာသည်
တက္ကစီ ယာဉ်မောင်းအား ရပ်ပေးရမည်နေရာပြောရန် ပုခုံးပုတ်လိုက်ရာ
ကားမှာ ဘယ်ညာယိမ်းထိုသွားကာ လမ်းသွားလမ်းလာများအားမတိုက်မိအောင်ရှောင်ရင်း
ကားသမားမှာမျက်လုံး အပြူးသား ချွေးသီးချွေးပေါက်များဖြင် ပြောလိုက်တာကတော့
။။။ဟာ ကျွန်တော်က မနေ့ကမှ အသုဘကားမောင်းတဲ့နေရာကအလုပ်ထွက်လိုက်တာဗျ။။။
ကောင်လေးက သိချင်သော ကိစ္စတစ်ခုကို သူ့အမေကို မေးနေ၏။
“အမေ၊ အစ်ကို့ကို ဘာလို့ နှင်းမုန်တိုင်းလို့ နာမည်ပေးထားတာလဲဟင်”
“သူ့ကို ကိုယ်ဝန်ရတော့ နှင်းမုန်တိုင်းတွေ တိုက်နေတဲ့ ရာသီမို့လို့ သားရဲ့”
“အစ်မကို ကျတော့ရော ဘာလို့ လရောင်လို့ နာမည်ပေးတာလဲဟင်”
“သူ့ကိုယ်ဝန် ရတဲ့ အချိန်က လအရမ်းသာနေလို့ပေါ့ သားရဲ့”
“ဒါဆိုရင် သားနာမည်ကျတော့ အဲလို လှလှလေး မဖြစ်ဘဲ ဘာလို့ ရော်ဘာပြဲ ဖြစ်နေရတာလဲဟင်”
“မီတာဗျ။ အရမ်းမြန်တယ်။ Made in Japan လေ”
စကာင်္ပူ ၀န်ကြီး ။ ။ ဟာ.. ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာဆို၊ စက်ရုံတွေကို ပို့ ပြစ်ပြီး လိမ္မော်သီး ယို လုပ်တယ်ဗျ။
ဒါနဲ့ စကာင်္ပူ ၀န်ကြီးလဲ ပီကယ်မှာလိုက်ပါတယ်.စားပြီးသွားတော့ ပန်းကန် ပေါ် ပြန်တင်လိုက်ပြီး မေးခွန်း ဆက်မေးပါတယ်။
စင်္ကာပူ ၀န်ကြီး ။ ။ ကျွန်တော်တို့စီမှာဆို စားပြီးသား ပီကယ်ကို စက်ရုံတွေပို့ပြီး Condom လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကို တင်ပို့ ရောင်းချတယ်။
ဆက်ပြီးတော့ ဘုရင်ကို ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ပြန်ခါနီးကြမှ ဘုရင် က မေးခွန်းတစ်ခု ထမေးပါတယ်။
ထိုငိးဘုရင် ။ ။ အေး၊ ငါတို့ စီမှာတော့ Condom သုံးပြီးရင် စက်ရုံတွေကို ပို့ပြီး စင်္ကာပူကို တင်သွင်း ရောင်းချဘို့ ပီကယ်ပြန်လုပ်တယ်ကွ။
အမျိုးသမီး ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်တစ်ယောက်သည် ကွန်ပျူတာ မကျွမ်းကျင်သော ဘရုတ်သုက္ခ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏
ကွန်ပျူတာကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေရသည်။ Log in ၀င်ရန် Password အဖြစ် မည်သည့် စကားလုံးကို
ထားလိုကြောင်း သူမက ကိုနှာဘူးကို မေးလိုက်သည်။
ထိုသူက အမျိုးသမီးကို ရှက်သွားစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် PENIS (အမျိုးသားတန်ဆာ)
ဟူသော စကားလုံးကို ထည့်ခိုင်း၏။
သူမကလည်း မျက်နှာကို တင်းတင်းထားရင်း ခပ်တည်တည်ဖြင့် သူပြောသည့် အတိုင်း
ထိုအခါ ပေါ်လာသော ဆော့ဖ်ဝဲ၏ ပြန်ကြားချက်ကို ဖတ်ကာ ထိုလူ့ မျက်နှာ ရှုံ့မဲ့သွားသဖြင့်
သူမ အူလှိုက်သည်းလှိုက် မရယ်မိအောင် အတင်းကို ထိန်းထားလိုက်ရလေတော့၏။ ပေါ်လာသော စာကြောင်းမှာ
*** PASSWORD REJECTED. NOT LONG ENOUGH ****
(Password ကို လက်မခံပါ။ လုံလောက်အောင် မရှည်သောကြောင့် ဖြစ်သည် ဟူ၏)
ထို့နောက် အကြံတစ်ခုရပြီး လူနာကိုမေးလိုက်တယ်…
ဟုတ်ပြီ။ ဒါဆို အဲဒီရောဂါ ပြန်ထတာပဲ။။။။။။။။။။
ပတ်ဝန်းကျင် လေထုထဲက အနံ့တွေပျောက်အောင် ကဗျာကယာ
Posted by shwewunyatana at 7:14 AM
ပန်းကမ္ဘာ August 8, 2012 at 11:31 AM
ဟက်ပီးဘက်ဒေးပါ ဆရာတော်. ရီစရာတွေအများကြီးနဲ့ တော်တော်ရီလိုက်ရတယ်.. အားလုံးအဆင်ပြေ သာသနာပြုနိင်ပါစေ..